Previous Article Gọọmenti Ga-Akụkpọ Ụlọ Ọbụla E Ji Eme Mpụ Na Arụrụala -- Obianọ
Next Article Ndị Òjì Egbè Abagbuola Onyeisi Ọchịchị Obodo Nimo n'Anambra
Gọvanọ mere ka a mara nke a oge ọ gara ịkasì ndị ezinaụlọ ọnyeisi ọchịchị obodo Nimo, bụ maazị Anthony Igboka lagoro mmụọ obì na be ya dị na Nimo, n'okpuru ọchịchị Njikọka nke steeti ahụ.
Gọvanọ Obianọ katọrọ dịka nke jọgburu onwe ya, ogbugbu ahụ e gburu ya bụ nwa amadi site n'aka ndị agameebù, bụ ndị jiri egbe wee sụọ ya kọtọkọtọ n'ahịa Oye Nimo n'abalị iri na isii nke ọnwa Epure. O mere ka a mara na ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ na-eleba anya ma na-eme nnyocha banyere ogbugbu ahụ, iji nwụchikọọ ndị arụrụ ala ahụ kụrụ ya bụ akụmakụ.
O kwuputara na atụmatụ nchekwa na steeti ahụ ka bụkwa nke kacha mma n'ala Nigeria gbaa gburugburu, ma sịkwazie na a ga-anwụchikọrịrị ndị ahụ, na-agbanyeghị ebe ha zòrò ma ọ bụ ogologo oge ole o werè.
Gọvanọ Obianọ gakwazịrị n'ihu kwuo na e nweghị ebe mgbaba ma ọ bụ ebe nzuzo ọbụla dịịrị ndị omekoomè na steeti ahụ, ma kwukwazịe na atụmatụ 'Operation Kpochapụ' ahụ ga-enye aka n'ụzọ dị ukwuu ikpochapụ ndị arụrụ ala ahụ, bụ ndị jikwa nwayọ nwayọ arịpụtasịkwa ọzọ ugbu a.
N'okwu nke ya, onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo Njikọka nke abụọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra, bụ maazị Pete Ibida kwùrù na ndị ọgbọ nta nkwàdo ya na ndị Nimo niile na-ekele gọvanọ Obianọ maka itinye ọnụ ozigbo na ya bụ okwu ma mekwa ihe pụtara ìhè banyere ya, ọ kachasị ịmapụta ego dị nde Naịra ise dịkwa ụgwọ ọrụ dịịrị onwe ọbụla ga-agba ezi àmà a pụrụ iji nwụchikọọ ndị ahụ gburu ya bụ nwoke
O tòkwàrà gọvanọ n'ihi ndị òtù dị iche iche o zitegooro ha kemgbe ihe ahụ mere, na-agbanyeghị na ọ nọghị nso oge ahụ, ma kwekwazie nkwà na ha ga-aga n'ihu n'ezi nkwado ahụ ha na-enye ọchịchị ya, iji wee gaa n'ihu n'ọrụ ọma dị iche iche o ji n'aka na steeti ahụ.